११ वर्षपछि सूर्यमा ठूलो हलचल, पृथ्वीलाई खतरा ! « गोर्खाली खबर डटकम
११ वर्षपछि सूर्यमा ठूलो हलचल, पृथ्वीलाई खतरा !
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अहिले संसारका धेरै देशहरु लकडाउनमा छन् । तर वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा संसारलाई उज्यालो बनाउने सूर्य विगत ११ वर्षदेखि नै लकडाउनमा थियो । अन्ततः अहिले सूर्य लकडाउनबाट बाहिर निस्किएको छ, अर्थात् सूर्य जागेको छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक ११ वर्षमा सूर्यको सतहमा ठूलो परिवर्तन हुने गर्दछ । पछिल्लो ११ वर्षदेखि सूर्य शान्त थियो, जहाँ अहिले हलचल चलिरहेको छ । जसका कारण सूर्यमा ठूलो धब्बा देखा परेको हो ।
उक्त विशाल सनस्पट हाम्रो पृथ्वीतर्फ घुमेको देखिएको छ । सोही कारण यसबाट निस्कने सौर्यज्वाला पृथ्वीलाई हानिकारक हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।
उक्त सनस्पटलाई AR2770 नाम दिइएको छ । आगामी दिनमा यसको आकार अझै ठूलो हुन सक्दछ । स्पेस वेदर डटकमको रिपोर्ट अनुसार उक्त सनस्पटबाट स–साना ज्वालाहरु पहिलेदेखि नै निस्किरहेका छन् ।
दिदि–भाईको पवित्र सम्बन्धमा कालो धब्बा,ग; र्भवती भएको ७ महिनापछि खुल्यो रहस्य
वालिङको चन्द्रपुरमाथि जित